Maxaa lagu arkaa Bergen | Wararka Safarka
Maxaa lagu arkaa Bergen
Mariela Carril | | Norwey, Maxaa la arkaa
Hadaad booqato Norway, markaa Bergen waxay ku jiri doontaa liiskaaga maxaa yeelay waa magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas iyo waxa loogu yeero «Caasimadaha fjords». Marka, laga bilaabo Bergen doonyaha mas'uulka ka ah booqashada dhulkan quruxda badan ee buuraha dhaadheer iyo biyaha barafka leh ayaa ka baxa.
Bergen waxay ku taal xeebta koonfur-galbeed ee dalka, dooxad qurux badan oo ay ku wareegsan yihiin toddobo buurood, nus qarni gudahoodna waxay u dabaaldegi doontaa kunkii sano ee ugu horreysay jiritaankeeda. In kasta oo ay tahay magaalo muhiim ah, waxay ilaalisaa laxanka ama jawiga tuulo gaar ah sidaas awgeed, waa isku xirnaan dalxiis oo cajiib ah.
2 Dalxiiska Bergen
Magaalada waxaa la aasaasay 1070 sidaa darteed waxay ka weyn tahay 900 sano. Waxay lahayd nolol aad u mashquul badan sida dekedda maxaa yeelay kama badbaadin burcad-badeedda, aafooyinka ama dabka. Dabkii ugu dambeeyay ee runtii wax baabi'iya waxaa ku dhacay 1916. Kadibna waxaa yimid qabsashadii Jarmalka iyo duqeyntii xulafada.
Shaki la'aan, inkasta oo taariikhdeeda ama laga yaabo inay sabab u tahay, Bergen waa magaalo qurux badan. Ku magaalada jir waxay ku taal dhinaca woqooyi, goob ay ku yaalliin guryihii hore ee alwaaxda ahaa ee caadiga ahaa qarnigii XNUMX-aad, kaniisadeedkeeda iyo kaniisadihii hore ama qalcaddii dhexe. Deegaanka loo yaqaan Nygardshoyden Waxay sidoo kale caan ku tahay iyada Dhismayaasha qarnigii XNUMXaad, marka asal ahaan waa magaalo in, taariikhdeeda ciriiriga ah awgeed, isku darsato qaabab dhismeedyo kala duwan.
Bergen ma magaalo aad u qabow baa? Wax badan maahan, Mahadsanid qulqulka Gacanka waa mid dhexdhexaad ah, in kastoo roob badan ayaa da'aaya. Aynu nidhaahno cimilada waxay la mid tahay Scotland. Ma fududahay in halkan la yimaado? Hubaal, waa laga heli karaa meel kasta oo adduunka ah. Waxaad ku imaan kartaa diyaarad ama doomaha Danmark, tusaale ahaan, ama tareenka Oslo. Haddii aad diyaarad ku timaaddo magaalada waxaa jira siyaabo fara badan oo loogu xirayo garoonka diyaaradaha iyo xarunta.
Waad dooran kartaa Baska Madaarka ama tareenka fudud, Bybannen, ama tagaasida. Tareenka ayaa ah midka ugu raqiisan wuxuuna qaadanayaa kaliya 45 daqiiqo iyadoo qofkii qaangaar ah uu ku kacayo NOK 38. Haddii aad sidoo kale horey u haysatay Bergen Card, kaarka dhimista dalxiiska, hadda waad ku safri kartaa bilaash. Haddii aad ku raacdo baska garoonka diyaaradaha ama Flybussem isla kaarka waxaad leedahay qiimo dhimis 20% ah, oo aad ku bixinayso 30 NOK. Baskaan wuxuu dhowr joogsi ku leeyahay bartamaha.
Wax badan baa jira in la arko laakiin la sameeyo isku-dhafid haddii ay tahay markii kuugu horreysay waa inaadan u seegin Bryggen, Floibanen Funicular, Aquarium iyo Suuqa Kalluunka. Bryggen waa Goob Hidaha Adduunka ah waana qaybta taariikhiga ah ee magaalada.
Maanta Guryaha iyo dhismooyinka Bryggen waxaa loo beddelay aqoon-isweydaarsiyo, qolalka farshaxanka iyo makhaayadaha. Tan iyo aasaaskii Bergen jidadkani waxay ahaayeen halbowlaha ganacsiga sidaa darteed waa socod wanaagsan, oo ay ka buuxaan luuqyo qurux badan oo aad ku arki karto kuna iibsan karto dhar, sawirro, farshaxanno, farshaxanno ama dahab. Sidoo kale halkan waa kan Qalcadda Bergenhus iyo Suuqa Kalluumeysiga, iyo sidoo kale tobanaan makhaayado iyo makhaayado.
Inta lagu jiro bilaha xagaaga magaalada waxay bixisaa adeegga baska baska qayb ka mid ah Matxafka Hanseatic iyo Schotstuene Matxafka Kalluumeysiga ee Norway. Matxafkii ugu horreeyay wuxuu inoo sheegayaa sheekada ganacsatadii ka shaqeyn jirtay Bergen afar qarni. Cabsida dabka darteed, kuleyl iyo iftiin midna looma oggolaan dukaamleyda, sidaas darteed waxaa jirey hool wadaag ah oo leh jikada halkanna waxay ku kulmeen xilliga qaboobaha
Intaa ka dib, matxafka la xiriira kalluumeysiga wuxuu noo sheegayaa aragtida xeebta iyo badda. Waxay ka shaqeysaa bakhaar dhab ah oo ku yaal dekedda oo ku taal qeybtii hore ee Bergen waxaana ka buuxa macluumaad ku saabsan howlaha kalluumeysiga. Hadda, ku saabsan soo galitaanka matxafyadan, isla tigidhka waxaa ku jira albaabka laga galo saddexda matxaf waxaana laga iibsan karaa internetka. Baskaan wuxuu ka ambabaxayaa Xafiiska Dalxiiska Bergen: joogsiga ugu horeeya wuxuu marayaa Schotstuene, iyadoo loo sii marayo Stranskaien, Strandgaten, Torget iyo funibulaha Floibanen
Ka bilow Schotstuene ilaa Matxafka Kalluumeysiga ee Norwey ka dibna ku laabo barta bilowga. Adeegani wuxuu baxayaa nus saac kasta waana lacag la'aan. Inta udhaxeysa May iyo September waqtiga ugu horeeya waa 10:15 am iyo kan ugu dambeeya 5 pm. Bilaha Juun, Julaay iyo Ogast marka ugu horaysa waa isku mid kan ugu dambeeyaana waa 6 galabnimo.
Soojiidasho kale oo midab leh oo xiiso leh ayaa ah Floibanen funicular oo fuulaya Mount Floyen. Dusha sare aragtidu way fiican tahay maaddaama ay dhererkeedu yahay 320 mitir. Funicular waa sawir qurxoon, oo leh baabuur dhaqameed taasi waxay shaqeysay qarni ka hor. Barta laga bilaabayaa waa wadnaha magaalada hoose ee Bergen dusheeduna waxay u jirtaa uun lix daqiiqo markii loo socdo. Ku aragtida magaalada, buuraha iyo fjord waa weyn.
Dabaqa hoose waxaa ku yaal rootiya yar oo leh makhaayad iyo dukaan hadiyadeed si marwalba aad u fadhiisatid xoogaa oo aad ugu raaxeysatid daqiiqadaas. Haddii aad raacdo carruurta waxaa jira beero yar oo la yiraahdo Forest of the Trolls iyo haro lagu raaco doon yar. Waxaad ku socotaa toban daqiiqo illaa xeebta harada halkaas oo ay sidoo kale ku taal maqaaxi kale. Xilliga xagaaga waa qurux badan tahay iyo haddii aad jeceshahay inaad socoto buurta korkeeda waxaa jira wadiiqooyin fara badan oo kuu qaadi doona meelaha kale ee cajiibka ah.
Xitaa waad ku socon kartaa Mount Floyehn ilaa Mount Ulriken. Wadada waxaa loo yaqaan Vidden waana mid ka mid ah socodka ugu caansan. Dabcan, waa shan saacadood oo socod ah. Haddii aad haysatid Kaarka Bergen, funicular waa bilaash bisha Oktoobar iyo qiimo dhimis 50% ah inta udhaxeysa May iyo September. Qiimaha caadiga ah ee qof weyn waa 100 kr.
Meel kale oo caan ah ayaa ah Matxafka Edvard Grieg, banaanka xarunta. Ninkani wuxuu ahaa halabuur caan ah guriguna wuxuu kusugan yahay sidii uu ahaa 1907.Hadii aad tagto xagaaga waad cuni kartaa kuna raaxeysan kartaa riwaayad. Riwaayadahaani waa kuwo caan ah sidaa darteed haddii aad xiiseyneyso waa inaad si dhakhso leh uga iibsataa khadka tooska ah. Si aad u booqato matxafyo badan, laakiin farshaxanka waad garan kartaa KODE. Waxa kale oo jira Matxafka Taariikhda Dhaqanka Bergen, Matxafka Theta, Hakon Hall, Rozenkrats Tower iyo Kaniisada Santa Maria, sida goobo taariikh iyo dhaqan ka buuxo.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, waxaa jira Matxafka hawada furan ee Old Bergen iyo ururinta 40 guri oo alwaax dhaqameed ah, oo u eg qarniyadii siddeed iyo tobnaad iyo sagaal iyo tobnaad. Waxaa jira wax kasta oo ka bilaabma rootida iyo timo jaraha ilaa dhakhtarka ilkaha ilaa guryaha gaarka loo leeyahay. Xilliga xagaaga waxaa jira jilayaal soo saara nolol maalmeedka "jir Bergen".
La Kaarka Bergen Waa kaarka dalxiis ee lagula taliyay haddii aad maalmo joogayso oo aad rabto inaad booqato oo aad barato magaalada. Waxaa jira saddex nooc:
Kaarka Bergen 24 saacadood: NOK 280/100
Kaarka Bergen 48 saacadood: NOK 360/130
Xamuulka Bergen 72 saacadood: NOK 430/160
Qiimahan waxaa loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta laga bilaabo 3 illaa 15 sano jir. Ugu dambeyn, Marka la fiiriyo aafada halista ah ee na haysata, Norway sidoo kale waxay qaadaysaa taxaddar: Qof kasta oo maanta yimaada waa inuu karantiil ahaadaa, inay calaamado leeyihiin iyo in kale. Gaadiidka gudaha ayaa caadi ah illaa ogeysiis dheeri ah, safarada raaxada waa la niyad jabay waxaana laga fogaanayaa gaadiidka dadweynaha haddii aan loo baahnayn. Haa, waa waqti aad u xun dalxiiska. Faraha ayaa ka gudbay si ay u dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Norwey » Maxaa lagu arkaa Bergen
Maxaa lagu arkaa Ribeira Sacra
Maxaa lagu arkaa Catania